आधारभूत नुस्खा: पिको डे गैलो - Thermomix व्यञ्जनहरु | ThermoRecipes
Verduras1 मिनेट4 व्यक्ति65२ क्यालोरी
यो आधारभूत पिको डे गैलो नुस्खा संग तपाइँ को धेरै को लागी सही गार्निश हुनेछ मेक्सिकन बर्तन कि तपाइँ घर मा तयार छ।
यो एक छ ताजा र मसालेदार संयोजन टमाटर, प्याज, मिर्च, लसुन, धनिया र नींबू धेरै सजिलो र छिटो बनाउन को लागी। हामी पहिले नै यो संग प्रयोग गरीएको छ quesadillas, burritos y nachos.
यो झूट जस्तै लाग्छ कस्तो सजिलो यो तपाइँको व्यञ्जनहरु लाई सही बिन्दु दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो प्रयास गर्न नछोड्नुहोस्।
1 आधारभूत नुस्खा: पिको डे gallo
2 के तपाइँ यो आधारभूत पिको डे गैलो नुस्खा को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
एक सरल र छिटो नुस्खा जसको साथ तपाइँ तपाइँको भाँडामा रंग र स्वाद दिन सक्षम हुनुहुनेछ।
भान्छा कोठा: मेक्सिकन
मासु र पकाएको टमाटर को 500 ग्राम
30 ग्राम मिर्च
1 चम्मच (मिठाई आकार) नुन
धनिया को2टुक्रा (मात्र पातहरु)
हामी टमाटर राम्रो संग धोएर सुकाउँछौं। हामी तिनीहरूलाई क्वार्टरमा काट्छौं र कडा केन्द्रीय भागहरु हटाउँछौं। हामी गिलास मा टुक्राहरु राख्छौं।
बाँकी सामाग्री जोड्नुहोस् र समयमा काट्नुहोस् Seconds० सेकेन्ड, गति 6।
हामी जाँच गर्छौं कि टमाटर राम्रो संग कटाईएको छ र हटाउनुहोस्।
हामी सेवा वा फ्रिज मा खपत को क्षण सम्म आरक्षित।
यदि तपाइँ प्याज नोटिस गर्न मनपराउनुहुन्न भने तपाइँ5सेकेन्ड को लागी शुरुवात मा यसलाई काट्न सक्नुहुन्छ, गति 5।
के तपाइँ यो आधारभूत पिको डे गैलो नुस्खा को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ?
पिको डे gallo धेरै अन्य व्यञ्जनहरु जस्तै छ बिभिन्न संस्करणहरु। यस पटक हामी धेरै भन्दा धेरै मूल नुस्खा को लागी सकेसम्म धेरै टाँस्ने कोसिस गरेका छौं। जे होस् म पक्का छु कि हामी चाँडै बिभिन्न अवयवहरु संग अन्य तयारीहरु लाई साझा गर्नेछौं।
एक नुस्खा छ ताजा जस्तै यो सरल छ र तपाइँ मिनेट को एक मामला मा तयार हुनेछ। र त्यो तपाइँ दुबै थीम्ड डिनर को लागी र एक फ्रान्सेली आमलेट को रूप मा सरल व्यंजनहरु को लागी रंग र स्वाद दिन को लागी सेवा गर्दछ।
मेरो स्वाद को लागी तपाइँ एक को उपयोग गर्नु पर्छ टमाटर कि स्वादिष्ट, मासु र पाकेको छ यो यो नुस्खा को आधार हो।
यो एक मसालेदार स्पर्श दिन को लागी पनि महत्वपूर्ण छ। यस अवस्थामा हामीले प्रयोग गरेका छौं मिर्च र लसुन तर spiciness जाँदै छैन भने तपाइँ मिर्च दबाउन सक्नुहुन्छ।
नबिर्सनुहोस् कागती वा कागतीको रस नुस्खा को मौसम र यो एक एसिड स्पर्श दिनुहोस् कि अद्भुत जान्छ।
यो नुस्खा यति छिटो छ कि यो सामान्यतया छ पल मा गर्नुहोस्वा। यद्यपि यो पहिले नै गर्न सकिन्छ र फ्रिजमा चिसो गर्न छोड्नुहोस्। यस अवस्थामा, म सुझाव दिन्छु कि तपाइँ अन्तिम क्षण सम्म नींबू थप्नुहुन्न किनकि यसले अवयवहरूलाई "पकाउने" गर्छ।
थप जानकारी - ग्वायाकोमोल र पिको डि ग्यालोको साथ मेक्सिकन क्वेकाडिल्लाहरू / XXL चिकन burrito / चीज र चिली कोन कार्नेको साथ नाचोस
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: अन्तर्राष्ट्रिय भान्छा, सलाद र तरकारीहरू, भेगन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » सलाद र तरकारीहरू » आधारभूत नुस्खा: पिको डे gallo
नट्स स्पन्ज केक